Kutsha nje wabonakala umdlalo odumileyo Umdala Imiqulu Online. A game enkulu nice kakhulu. Ngenxa njengazo zonke imidlalo online kuba kunzima kakhulu ukuya phambili kwaye wenze iqhawe lakho kakhulu njengoko iqela lethu liqulunqe isixhobo my kuyo.
Indoda enkulu Scrolls Online kugula Cheat i indalo lwenziwa liqela Morehacks.net kunye isixhobo lomnqweno yimfumba yinto elula kakhulu ukuba ukusebenzisa. le isixhobo ukukopela na 100% alibonakali kwaye ihlaziywa qho ixesha iyafuneka. Ngezantsi kukho imiyalelo yokusebenzisa ngayo kunye neempawu zakhe woderful.
EyoMdumba 17, 2014 ngexesha 5:31 pm
EyoMdumba 17, 2014 ngexesha 5:32 pm
EyoMdumba 26, 2014 ngexesha 10:33 am